Theresa May oo ku guul dareysatay iney baarlamaanka horgeyso qorsheheeda ka bixista Midowga Yurub - Halbeeg News
LONDON (HALBEEG)- Ra’isul wasaaraha dalka Ingiriiska Tresa May ayaa ku dhawaaqday in ay dib u dhigtay kulankii uu yeeelan lahaa maanta golaha baarlamaanka dalkeeda kaasoo qorshuhu ahaa in cod loogu qaado go’aanka ay Britain ku doonayso in ay uga baxdo Midowga Yurub.
Dhanka kale hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah ayaa ugu baaqay in ra’isul wasaare May ay banneyso kursiga fursadna siiso xisbigiisa, kadib markii ay qiratay marwo May in aysan heysanin codad ku filan oo u suura galinaya meel marinta go’aanka kama dambeysta ah ee Britain kaga baxayso Midowga Yurub.
Rai’isul wasaare May oo shalay hadal ka hor jeedisay golaga ayaa sheegtay in haddii ay isku daydo in xukuumaddeeda ay hindisaha horkeento golaha ay aaminsantahay in ay xildhibaannadu ku gacan seydhi doonaan.
“Haddii aannu hollinno inaannu horay usii tallaabsanno oo golaha aannu hor keenno hindisaha si cod ugu qaado waa hubaal in xildhibaannadu ay ka hor imanayaan” ayay tiri ra’isul wasaare May oo iyadu si weyn u aaminsan in ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub uu yahay go’aanka ugu habboon ee ay Britain qaadan karto.
Ra’isul wasaare May ayaa intaa sii raacisay “ waxaan dib u dhignay codayntii baarlamaanka ee dhici lahayd talaadada, mana doonayno inaannu qaadno tallaabo abuuri karta inay kala qeybsamaan golaha baarlamaanka, xubnaha golaha ee doonaya in mar labaad loo dareero bixinta afti dadweyne waa inay maanka ku hayaan in ay abuuri karto in Britain ay kala qeybsanto dhaawicina karto kalsoonidii lagu qabay dimoqraadiyadda dalka” ayay tiri marwo May.
Jeremy Corbyn hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha ayaa isna golaha baarlamanka u sheegay in heshiiska Britain looga saarayo Midowga Yurub ee ay hor kacayso xukuumadda Tresa May uu haadaan ka tuuray dhaqaalihii dalka, xukuumaddana ay imika gabtay howlaheedii oo ay gabi ka laalaaddo.
“rai’isul wasaare May waxay isku dayaysaa in ay ka faa’iideysato fursadda kama dambeysta ah ee imika hor taalla haddii sida ay doonayso ay u hirgali weydana waa inay booska u bannaysaa cid kale oo dalka wax ka badali karta”.ayuu yiri mudane Corbyn.
Siyaasadda gabi dhacleyneysa ee dalka ingiriiska ayaa sababtay in dalku uu lasoo gudboonaaday khalkhal iyo walaac dhanka dhaqaalaha ah iyada oo ay hoos usii dhacayso lacagta iyo dhaqaalaha dalkaasi.
Somaliland oo joojineysa diiwaangelinta dugsiyada cusub ee gaarka loo leeyahay